Villaroy zvihuta mazai - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Villaroy zvihuta mazai
Zvinokanganisa70 maminitsi6 vanhu120 makarori
kubudikidza Alicia tomero
Vanenge nguva dzose vanoda izvi zvinonaka zvinonaka. Ita kibble shapeVane bechamel muto uye zvishoma kushamisika mukati. Hurukuro hwayo uye runyoro rwakapfava rwunokufadza pamwe chete nezai diki rezvihuta mukati.
Iwo ari nyore uye anokurumidza, ane yedu chikafu processor iwe yaunogona kugadzira bechamel inoshamisa uye nekukurumidza, kuchengetedza nguva uye kuzvipira. Iwe unongofanira kushandisa maoko ako kuita croquettes.
Con batter inokurumidza uye kana yakakangwa ichave yakatsvuka uye inonaka. Iwo akakura kana tikavabaya neakareba mazino uye toishandisa se appetizer. Kana iwe uchida kuiperekedza nemuto, unogona kuedza yedu Italian style tomato sauce.
1 Villaroy zvihuta mazai
Zvokudya zvinonaka zvinogadzirwa nezai rezvihuta uye neinonaka yebechamel cream batter uye kupera kwekrispy.
Recipe mhando: appetizers
Nguva yekugadzirira: 45M
Kubika nguva: 25M
Nguva yakazara: 1:10 p.m.
12 zvihuta mazai
250 ml yemvura kubika
20 g mafuta omuorivhi
70 g yeupfu hwegorosi
300 ml mukaka wese
1 pini ye grated nutmeg
100g zvimedu zvechingwa zvakarungwa negariki uye parsley
1 saizi yehuku zai L
Kuwanda kwesunflower kana mafuta emuorivhi pakukangwa
Tinobika mazai. Tinogona kushandisa poto ine mvura uye chipunu chemunyu tosuma mazai. Tichavabika pakati Maminitsi makumi maviri nemakumi matatu. Kana iwe uchida kushandisa Thermomix, tichaisa mazai mubhasiki, kuwedzera mvura uye purogiramu Maminitsi makumi maviri nemashanu pavaroma tembiricha nekukurumidza 9.
Kana dzaibva tinodziburitsa, todzipfuudza nemvura inotonhora tozodzisvuura. Takabhuka.
Isu tinogona kushandisa iyo yakafanana Thermomix girazi kamwe yakachena uye yakaoma. Wedzera mafuta uye bhotela uye purogiramu ye Maminetsi matanhatu pa2 ° nekukurumidza 120.
Isu tinowedzera hupfu hwakapoteredza mashizha panguva Maminetsi matanhatu pa3 ° nekukurumidza 120.
Wedzera zvimwe zvakasara: mukaka, piniki ye nutmeg uye munyu kuvira. Isu tinogadzirisa panguvae 10 seconds pakumhanya 4 ndokuzo Maminetsi matanhatu pa6 ° nekukurumidza 100.
Rega bechamel ichidziya uye isu tichakwanisa kutora zvikamu zviduku zvatichaputira pamusoro pemazai. Iwe unofanirwa kuvapa chimiro checroquette. Kana ichiri kupisa zvakanyanya uye croquette haina kuoma, tinogona kuirega ichizorora mufiriji kwehafu yeawa.
Rova zai rehuku woisa chipunu chemvura. Tinopfekedza mazai akarohwa uye topfuura nepakati pezvingwa zvechingwa, compact uye chimiro chakanaka nemaoko edu.
Tinopisa mafuta. Kana yasvika pa optimum tembiricha tiri kukanda mazai akarohwa. Tichatenderera segoridhe. Tinovabudisa uye tinovarega vadonhe papepa.
Changosara kuvabaya netsvimbo woshumira. Iri ndiro rinogona kuperekedzwa ne mayonnaise-mhando sosi, mune yangu ine homemade tomato sauce.
Isu tinogona kugadzira bechamel nhanho nhanho mupoto:
Pisa mafuta uye bota.
Wedzera hupfu uye funganisa.
Zvadaro wedzera mukaka, munyu uye nutmeg uye whisk nguva dzose kusvikira bechamel yawedzera.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Nyore, General, Asingasviki 1 awa
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » General » Nyore » Villaroy zvihuta mazai
Mushroom empanada neIberian ham uye chorizo
Pancake, nemafuta kana nebhota?